Angawoota : Godiina Harargee Bahaa fi Dhiyaa Keessatti Liyyuu Hayilin Oromoota Torba Ajjesee
Sadaasaa 09, 2017
Godiina H/ Bahaa aanaa Fadis bakka Ereer jedhamtuutti Wiixata darbee Sadaasa 6 bara 2017 kaasee guyyootii walitti aanan afuriif humnootiin liyyuu haayle jedhaman haleellaa gaggeessaa kan jiran ta’u jiraattonni dubbatanii jiru.Liyyuu Haayliin bakka gaara Kooraa jedhamu qubatee kun lafoo gad bu’e haleellaa uummata oromoo irratti gaggeessee deebi’aa jedhu jiraattonni.
Haleellaa Kanaan nama tokko ajjesanii ofii isaanii eega awwaalanii booda qonnee baafnee reeffa kana maatii isaaf kenninee jedha bulchiinsii aanaa Fadis.Dhiyeenya kanas akkasuma dhukaasa bananii dubartii tokkoo fi Abbaa warraa afuur ajjesuu isaanii kan ibsan jiraattonni waluumaa gala waggoota sadeen darban keessatti Abbaa warraa kudha afuur ajjesan jedhu .Dargaggonnii oromoo fi hawaasnii naannoo tokkuummaan hojjataa akka jiranis bulchiinsii aanaa ibsee jira.
Gama kaaniin godiina Harargee Dhiyaa mi’eessoo keessatti jimaata darbe liyyuu haayliin nama 6 ajjesuu isaa bulchiinsii aanaa beeksisee jira.Haleellaan kunis lafaa fi qabeenya uumamaa saamuuf akka ta’e ibsamee jira.
Anaalee 11 kanneen daangaa irra jiran keessaa uummanni buqqa’ee kuma 23 ol akkasums kanneen bulchiinsa naannoo somaalee keessaa ari’aman kuma sadii waluumaa gala Oromoota kuma 26 ol yeroo ammaa rakkataa jiran gargaaruuf carraaqamaa kan jiru ta’uun ibsamee jira.
Mootummaan Itiyoophiyaa yakka rawwatamee kan sirreesuuf hanga tarkaanfii fudhatuutti uummanni waan danda’een of-irraa ittisuu akka qabu bulchiinsii aanaa hubachisee jira.